Mashi 7, 2012 kwaba ukunikezelwa kwama-tablet eside elindelwe kusukela Corporation Apple, umcimbi ngokwesiko eSan Francisco endaweni efanayo ababengaphambi ezimbili banikezwe. . Umcimbi akubalulekile nje abathandi emakethe computer, kodwa nezalo lonke zomhlaba zezimali, Nhlangano liye leqa $ 500 bhiliyoni ofeleba, neminyango kohlaziyo izinkampani kakhulu utshalomali emhlabeni igxile ecishe - ukuthi siqhubeke sikhula "Apple" amasheya noma izoyenqaba. I ukunemba udaba kuphela kwaqina ngemva isethulo, kwasekuqaleni, ke awusahloni- edume Stiv Dzhobs, okwesibili, zonke ezintsha (processor entsha, Retina Display isinqumo 2048 * 1536 ikhamera 5MGP) kudivayisi into ngokuyinhloko entsha.
Mashi 16 at 8:00 am Apple waqala ukuthengisa entsha tablet yayo oyisizukulwane sesithathu, njengoba kulindeleke ukuthi abangela isiyaluyalu, kodwa ungakhohlwa ukuthi iningi abathengi kokufika kwegagasi lokuqala, abalandeli of the brand. Ngemva idivayisi ahlola waya ngokulandelana ukubuyekezwa, okungase izigaba ezimbili, umuntu wathi mayelana nomehluko omncane kwabanye of eliyisisekelo discontinuity ubuchwepheshe. Kuphephile ukusho into eyodwa, iPad 3 oludlula esasisandulele, mayelana namandla kanye nokwenyuka ibhethri ngobukhulu, kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Ngokukhulu ukuzethemba okukhulu singasho ukuthi lena kwemvelo qualitative emhlabeni lwamakhompyutha ephathekayo.
Ake ngikunike ambalwa izingcaphuno ezindaweni ezinedumela elihle:
"Entsha-Tablet PC alulusha. Apple Inc wathatha nje iPad kahle zimenyezelwe futhi olwesimanje ngosizo zobuchwepheshe obuphambili. Uma une ipad2, khona-ke akudingeki bame emigqeni isikhathi eside! "Devig Pogue« I-New York Times »
"Ekugcineni sabekwa zonke amaphuzu phezu« i ». Apple idale iyunithi unqambothi. Liqinisekisa isihloko izenzakalo sivumele isishaya-mthetho e-esigabeni sayo. Apple onjiniyela kwi ngaphambi izimbangi zayo main ikhanda. isibonisi retina - kuhle kakhulu, kubukeka nje ngiyaphupha, uma sikhuluma ngolimi olulula, le piece enhle ephepheni. "UJoshuwa Topolsky« The Verge »
Ngakho, nokho, isinqumo ukwamukela zimali Securities Apple Inc izibambiso?
Okokuqala kudingeka unqume phezu Isu lokutshala izimali, uma unentshisekelo yokuthola imali ngeqoqo lezinyathelo ukwabelana Apple Inc ezinyangeni ezimbalwa ezizayo, zimali kufanele balindele lwesigameko omuhle kakhulu kuphela. The main umshayeli ukukhula ngoba izenzo nezinsolo isidingo eqinile imikhiqizo yenkampani, kakhulu olunikezwa muva wavula emakethe Chinese ithemba ukukhula umnotho emkhakheni Pacific. Futhi ungakhohlwa ukuthi okusezingeni eliphezulu emakethe ofeleba esinjalo etholwe elinesimo sezulu esihle kakhulu Apple onyakeni owedlule, kusho le nkampani ibike izinga lokukhula ngemali 85%. Ingabe singalindela ukuba ukusebenza efanayo ezinsukwini ezizayo? Ukuze umkhiqizi eyinhloko ukusebenza utshalomali "Apple imikhiqizo" ubukeka P kuhle kuzwakala kuyihaba / BV = 5.83, P / S = 4,09, kunobungozi eliphezulu "entry ophahleni." Naphezu kwamandla zezimali nezobuchwepheshe kwemibandela ngokuvuma corporation, bengingeke ukweluleka amaklayenti ukuthenga izibambiso Apple Inc (AAPL: NSQ), sisekelwe eenkambisweni utshalomali "AnkorInvest", enye yazo ukuqinisekisa ukuphepha esiphezulu iklayenti izikhundla, ukuthenga enjalo kungaba ingozi kakhulu.
Nge ukukhula emakethe eselula ne-Apple ukunqoba, kwakheka lonke umkhakha abahlinzeki "apula" bezinkampani eziningi zalezi zinkampani cishe ngokuphelele ugxile supply izingxenye for the "ingane" Imisebenzi. Kulesi sisekelo, kuthathwa ngokuthi inkampani Ihlobene ngokuseduze Nhlangano, futhi kukhombise ukwanda okusheshayo e inzuzo. Ngokusho kochwepheshe kusukela IHS iSuppli NAND flash inkumbulo main inzuzo generator ye-Apple Inc., ukuze sikwazi ngokuthi corporation kuyoba aphathe kakhulu ngokunembile lolu hlobo abahlinzeki. Okwamanje, omunye abahlinzeki kuyinto inkumbulo Toshiba Corp.
Kuwufanele benaka izibambiso wale nkampani. Mhlawumbe esikhathini esizayo esiseduze azobonakala ukukhula okukhulu, nakuba ngaphandle ukutadishwa ibhizinisi omunye yenkampani kanye nokusebenza kwezimali, kunzima ukusho ngokuqiniseka.
Kulokhu okungenhla kumele kuphetfwe ezingase ehlukile ukuthenga Apple ukwabelana kube sitshala imali ingxenye abahlinzeki yenkampani. Kodwa lena akuyona indlela kuphela. inkampani yayo amaklayenti utshalomali "AnkorInvest" lihlale lizama banezeluleko izixazululo for diversification lobungozi ezimakethe zamasheya.
Omunye khetho ezithakazelisayo kuyinto ukuphathwa imali zibhebhetheka ukuphathwa isu e olunikezwa "AnkorInvest" isu kakhulu ehlukile emakethe Russian utshalomali. Discretionary iphothifoliyo ukuphathwa lisakazeka e-US stock market, kwenza kube nokwenzeka ukuba uthole imali esitalini obuncane, AnkorInvest izinkampani lokuma ' "ukuhlinzeka imbuyiselo yaminyaka yonke 20%, kuye ngokuthi imakethe simo esishubile. Isici esiyinhloko salelo lelisu yikhono imali ngisho emakethe falling. Lolu hlobo ukuphathwa iphothifoliyo kuyoba ikakhulukazi ezithakazelisayo amakhasimende nesithakazelo American emakethe IT, kodwa ungafisi bahlinza izingozi okusezingeni eliphezulu.
Nokusebenza ngamabhange - liwumgogodla ukuthuthukiswa komnotho
Gothic ingubo: izithombe nemininingwane
Yuliy Mihaylov (Kim Yuliy Chersanovich): Umlando nemisebenzi
"Garage" (Gorky Park) - emangalisayo yesimanje art Museum